WHO: Galbeedka Afrika waa COVID-19 'udub dhexaadka dhimashada'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » WHO: Galbeedka Afrika waa COVID-19 'udub dhexaadka dhimashada'
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Cote d'Ivoire • Wararka Dowladda • Guine News • Caafimaadka Warka • News • Wararka Nigeria • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Agaasimaha Gobolka ee Xafiiska Gobolka ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) Xafiiska Afrika, Dr. Matshidiso Moeti
Xaaladda COVID-19 waxaa sii murugsan xaqiiqda ah in bukaannada qaba cudurrada halista ah lagu aqoonsaday laba waddan oo gobolka ah: qandhada Ebola ee Côte d'Ivoire iyo qandhada Marburg ee Guinea deriska la ah.
Dhimashada COVID-19 ee Galbeedka Afrika ayaa kor u kacday 193%
WHO waxay xaaladda Galbeedka Afrika ku tilmaamtay 'masiibo'.
Ebola iyo fayraska Marburg ayaa adkaynaya ololaha ka hortagga COVID.
Dhimashada fayraska COVID-19 ee Galbeedka Afrika ayaa kordhay 193%. Tirada dhimashada ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay oo dhan. Xaaladda musiibada ayaa looga hadlay warbixintii ugu dambeysay ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO).
Saraakiisha WHO waxay sidoo kale xuseen kiisas cusub oo ah Ebola daran iyo fayraska Marburg, oo adkeynaya xaaladda cudurrada faafa. Intaa waxaa dheer, kiisas badan oo daacuun iyo cudurro kale oo khatar ah ayaa lagu diiwaangeliyaa West Africa.
Waxaa jira gaar ahaan cudurro badan oo dillaaca:
Agaasimaha Gobolka ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) Xafiiska Gobolka Afrika, Dr. Matshidiso Moeti ayaa ka faallooday xaaladda: “Xaaladda COVID-19 waxaa sii murugsan xaqiiqda ah in bukaannada qaba cudurrada halista ah lagu aqoonsaday laba waddan oo gobolka ah: xumadda Ebola ee Côte d'Ivoire iyo Xummadda Marburg ee dalka deriska la ah ee Guinea. ”
Sannadkii 2015 -kii, WHO ayaa ku dhawaaqday inay cirib -tirtay cudurka dabeysha, laakiin cudurka ayaa ka dillaacay Uganda 17 -kii bishii Ogoosto ee sannadkan. Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta WHO, tani waxaa sabab u ahaa masiibada COVID-19 oo sababtay in heerka tallaalka fayrasyada kale hoos u dhaco.